Meltwater na-enye ọgaranya Nsonaazụ-Na-akwagharị Social Media Marketing n'elu ikpo okwu nke ahụ na-ewu ewu n'ụwa niile, ọkachasị na ụlọ ọrụ mmekọrịta ọha na eze.
Zụlite obodo azụmahịa dị ike na Meltwater na-elekọta mmadụ mgbasa ozi ịre ahịa iji wuo ụdị, zụlite ndị na-akwado ya na ị nweta ego. Meltwater na-elekọta mmadụ media ahịa ngwọta jikọtara miri na-elekọta mmadụ media nlekota na nchịkọta na oru ndi mmadu na-eme nke oma iji nyere gi aka meputa ihe omuma ahia karie ma wulite mmekorita di omimi karie obodo buru ibu iji nyefee ezigbo mgbasa ozi ROI.
Atụmatụ dị ka akọwara na saịtị Meltwater:
Ngwọta nlekota oru Social Media - Nweta nghọta sitere na mgbasa ozi mmekọrịta na otu esi etolite azụmahịa gị site na Meltwater social media nlekota oru. Chọpụta usoro ị nwere ike iji rụọ ọrụ mgbasa ozi mgbasa ozi gị. Ghọta isi mmalite nke echiche mmekọrịta mmadụ na ibe ya iji melite mgbasawanye mmetụta. Nyochaa mmetụta dị n'azụ nkọwa mmekọrịta ọha na eze iji dozie ụda nke ọdịnaya ahịa gị. Zube ahịa gị na mgbasa ozi mgbasa ozi ebe ozi ụlọ ọrụ gị nwere ike ịnweta ọtụtụ traction. Ihe nlekota oru nlekota ndi mmadu nke Meltwater na enyere gi aka ikwusi uzu, ya mere inwere ike lekwasi anya na mkparita uka ndi mmadu na-enye ezigbo omuma ahia na ohere.
Atụmatụ Social Media - Mee ka mgbasa ozi mgbasa ozi ROI dịkwuo site na ịtọ usoro mgbasa ozi mgbasa ozi gị na nghọta azụmaahịa miri emi. Ghọta mkpa nke ndị na-ege gị ntị lekwasịrị anya site na nlekota oru mgbasa ozi. Nyochaa nkọwa mmekọrịta mmadụ na ibe gị iji chọpụta etu gị na ndị asọmpi gị si egbo mkpa ndị ahụ. Nyochaa ọwa mgbasa ozi mmekọrịta gị na ndị na-ege gị ntị na-ejikarị eme ihe mgbe ị na-ekwu maka ngwaahịa gị iji mee ka mmekọrịta gị na ndị mmadụ nwee mmekọrịta. Wụpụta usoro mgbasa ozi nke na-egosipụta ndịiche dị iche iche gị na Meltwater social media solutions iji mee ka ROI nke mgbasa ozi mgbasa ozi gị.
Ngwọta njikọta mmekọrịta ọha na eze - Kpalite mmụba nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya iji kpalie ịkwado ụdị nkwado. Mgbasa ozi ahịa mgbasa ozi na-elekọta mmadụ na-adabere na ntinye aka na mgbasa ozi. N'adịghị ka mgbasa ozi mgbasa ozi na mgbasa ozi na-eduzi, ezughị ezu ịhazi ihe ị ga-ekwu ma mee, ị ga-ebu amụma ihe ndị obodo gị ga-aza ma kesaa. Ikwesiri ime ka ndi mmadu nwee mgbasa ozi. Mee ka ndị ahịa gị na mmekọrịta obodo sie ike site na itinyekwu aka na ụdị gị. Gbanwee mkparịta ụka n'ime ndị ahịa na ndị ahịa ka ha bụrụ ndị na-akwado akara site na itinye aka na mgbasa ozi mmekọrịta mmekọrịta miri emi.
Nchịkọta Mgbasa Ozi - Tụọ ihe ịga nke ọma nke mgbasa ozi mgbasa ozi gị na mgbasa ozi mgbasa ozi na Meltwater social media nchịkọta azịza ya. Pịa na ndị na-eso ụzọ egosighi uru azụmahịa nke mgbasa ozi mgbasa ozi. Meltwater na-elekọta mmadụ mgbasa ozi nchịkọta ihe ngwọta na-enyere gị aka ịghọta otú mkpọsa gị si emetụta mkparịta ụka mmekọrịta mmadụ na otu mkparịta ụka ndị ahụ si bụrụ ezigbo uru ahịa. Gosiputa otu uzo ahia nke ndi mmadu na emejuputa ahia ahia gi. Mee mkpebi ndị dabere na eziokwu iji mee ka mgbasa ozi mgbasa ozi na-elekọta mmadụ na nkwụghachi ụgwọ site na iji nchịkọta mgbasa ozi ka mma.
Tags: gbazee mmirimmiri gbazeenchịkọta mmadụ mgbasa ozintinye mgbasa ozi na-elekọta mmadụelekọta mmadụ media ahịa ngwọtanlekota oru mgbasa oziusoro mgbasa ozi ọha na eze
Ihe Mere M Ji kpọọ Akaụntụ Nnyocha
Weghachite na Facebook na AdRoll Retargeting